# အမေ့ အားကိုးရမည့် သမီးများ # – Amara News
# အမေ့ အားကိုးရမည့် သမီးများ #
ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အမျိုးသမီးတွေကို ချောင်ထိုးထားခဲကြတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို နားမလည်နိုင်ကြတဲ့ လူတွေကြောင့် မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လူရာ မသွးင်ချင်ကြသလို မိန်းကလေးတိုင်းကိုလည်း လျှော့တွက်ခဲကြတယ် !
ခုခေတ် အမေစုခေတ်မှတော့ မိန်းကလေးတိုင်းသည် နိုင်ငံရေးမှာ နေရာရလာခဲကြတယ်။တန်းဖိုးထားတတ်လာကြတယ်။မိန်းမတွေရဲ့ ဥာဏ်ကို တစ်ချို့ ယောကျာ်းလေးတွေတောင် လိုက်မမှီကြပါဘူး။
တန်းဖိုးဆိုတာ ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာကို အရာရာ အားငယ်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးထုကြီးကိုမီးမောင်း ထိုးပြလိုက်ကြသလို တစ်ချို့ ယောကျာ်းကြီးတွေ ဖြစ်နေကြပေမဲ့ အရာရာ မိန်းမနောက်ကနေ လိုက်ပြီး ဦးမဆောင်ပေးနိုင်ကြတဲ့ ယောကျာ်းထုများကိုလည်း သူတို့က သင်ခန်းစာတွေပေးလိုက်ကြပြီး
ထင်ပေါ်လို့ စင်တော်ကိုရောက်လာကြတဲ့ အမေ့သားသမီးတွေနိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်မှ အမေ့အားကိုးရတဲ့သမီးတွေဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပြလိုက်ပါ!!သားသမီးများအားလုံးကို လေးစားပါတယ်ဗျာ !အကောင်းဆုံး နိုင်ငံရေးစင်မြှင့်ထက်မှာ ပြည်သူတွေ လေးစားတန်ဖိုးထားရတဲ့ သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြလိုက်ကြပါစို့နော်
ကျနော် အမေ့သား ko htut
# အမေ့ အားကိုးရမညျ့ သမီးမြား #
ဟုတျပါတယျ ကနြျောတို့ နိုငျငံမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ အမြိုးသမီးတှကေို ခြောငျထိုးထားခဲကွတယျ။အမြိုးသမီးတှရေဲ့ တနျဖိုးကို နားမလညျနိုငျကွတဲ့ လူတှကွေောငျ့ မိနျးကလေးတှဆေိုရငျလူရာ မသှးငျခငျြကွသလို မိနျးကလေးတိုငျးကိုလညျး လြှော့တှကျခဲကွတယျ !
ခုခတျေ အမစေုခတျေမှတော့ မိနျးကလေးတိုငျးသညျ နိုငျငံရေးမှာ နရောရလာခဲကွတယျ။တနျးဖိုးထားတတျလာကွတယျ။မိနျးမတှရေဲ့ ဉာဏျကို တဈခြို့ ယောကျြားလေးတှတေောငျ လိုကျမမှီကွပါဘူး။
တနျးဖိုးဆိုတာ ဒီလိုရှိတယျဆိုတာကို အရာရာ အားငယျနကွေတဲ့ အမြိုးသမီးထုကွီးကိုမီးမောငျး ထိုးပွလိုကျကွသလို တဈခြို့ ယောကျြားကွီးတှေ ဖွဈနကွေပမေဲ့ အရာရာ မိနျးမနောကျကနေ လိုကျပွီး ဦးမဆောငျပေးနိုငျကွတဲ့ ယောကျြားထုမြားကိုလညျး သူတို့က သငျခနျးစာတှပေေးလိုကျကွပွီး
ထငျပျေါလို့ စငျတျောကိုရောကျလာကွတဲ့ အမသေ့ားသမီးတှနေိုငျငံရေး ဇာတျခုံပျေါမှ အမအေ့ားကိုးရတဲ့သမီးတှဖွေဈအောငျ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားပွလိုကျပါ!!သားသမီးမြားအားလုံးကို လေးစားပါတယျဗြာ !အကောငျးဆုံး နိုငျငံရေးစငျမွှငျ့ထကျမှာ ပွညျသူတှေ လေးစားတနျဖိုးထားရတဲ့ သူတှဖွေဈအောငျကွိုးစားပွလိုကျကွပါစို့နျော
ကနြျော အမသေ့ား ko htut
Previous Article ခေါင်းဖြီးလို့ ဆံပင်တွေကျွတ်လာရင် စိတ်မညစ်ရအောင်
Next Article ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ ကူးစကျခံရရငျ – ရကျစှဲအလိုကျ ဒီလိုတှခေံစားရလိမျ့မယျ ..